Yekukurumidza kudzora gearbox Gearheads yekutengesa mutengo unodhura Industrial
Speed ​​dhiza gearbox yekutengesa mutengo unodhura maindasitiri
Isu tinopa yakakwirira chaiyo yekumhanyisa mhanyisa gearbox pakukoshesa kwakanyanya.
Yakakwira-mhando Yekumhanyisa Reducer Gearbox
Kune sarudzo hombe yemabhokisi emagetsi uye anomhanyisa anomhanyisa emhando dzakasiyana siyana dzekushandisa dzinoda torque yepamusoro uye inononoka kumhanya. Ese edu Ekumhanyisa Yekumhanyisa Reducers ane akanakisa mhando uye simba. Wana madhiri akanakisa pane maindasitiri eGearbox & Speed ​​Reducers.
Zvese Zvigadzirwa zvedu
Zvakadiniko nezve Iyo Yekumhanyisa Reducer Gearbox?
Worm giya rinodzora, rinowanikwa rakanangana kana rakanangana nemotokari, anoshandiswa mune yakaderera kusvika pakuenzanisa mashandiro emabhiza ekuderedza kumhanya uye kuwedzera torque. katatu-kudzora honye giya anomhanyisa anoderedza anowanikwa mune zviyero kubva ku5000: 1 kusvika 175000: 1 uye nzvimbo dziri pakati kubva 7 "kusvika 20" .Mapuraneti magiya anodzora ane magiya akarongedzwa neiyo yepakati-iri, yekunze-inemazino ezuva magiya ayo anoomesa neimwe kana mamwe magiya epasi. Yedu kurudyi-kona magemeri uye maacomputer anoratidza mamiriro-e-e-e-ounyanzvi anoshanda gearing. Tsvaga inline giya rekudzikisa bhokisi, linkbelt giya rinodzora, baldor dodge kumhanya kunodzora & zvimwe mumatanho akasiyana.
Chii chinangwa chekushandisa Speed ​​minimer gearbox?
Kuenzaniswa neiyo High Speed ​​Gear Reducer, Speed ​​minimer gearbox inoshandiswa kudzikisa kumhanya kwekupinza, kubva pamotokari kana kune mamwe madhiraivha, ukuwo uchiwandisa torque iyo yekukosha maitiro kune yekukurumidza kukurumidza kuburitsa shaft kana iyo dhizaini Inogadzirwa isu tinogadzira mhando dzakasiyana. yeanomhanyisa kudzikamisa, yakagadzirirwa kuwedzera torque uye kuderedza mutoro wekukurumidza wemagetsi ako emagetsi. Iyo inopa yakakwirira mhando, yakaderera mitengo zvigadzirwa. Paunenge uchigadzira dhizaini inotapudza, hazvina basa kuishandisa. Mune rimwe izwi, A gear inogadzirisa inowedzera torque uye inoderedza kumhanya kwemota. Iyo hollow shaft inotapudza inopa pakati thru-gomba ine chikamu chemukati chigadziro chegadziriro yekugadzirwa kwemaitiro uye nzvimbo yekuchengetedza sarudzo. Tsvaga yako yemagetsi mota giya inotapudza nyore pakati pezvigadzirwa makumi mana kubva kuChina inotungamira mhando.
Vamwe vanongedzera kweiyo Speed ​​yekudzora gearbox.
Mareferensi Kune Zvimwe Zvakawanda Simba Kuendesa Zvigadzirwa
Kana iwe uchida kutsvaga zvibvumirano zvakanakisa paR Speed ​​minimer gearbox
Isu tiripano takakumirirai.
Yedu Mota inogadzira helical Type nehonye mhando gear reducer (gearboxes) gearmotor. Isu takagadzirira uye tinotarisira kubatana kwedu. Isu tinotora mhando sekubatsira uye nemutengo wakaderera sekutendeseka.
Ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu uyezve inotevera kune vatinosangana navo. Isu tichakupindura iwe nekukurumidza sezvinobvira!
E-mail: [email inodzivirirwa] Skype ID: qingdao411